Okumangalisayo kwePt. Indlu yolwandle ethandekayo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJason
Ukubaleka okumangalisayo elwandle! Amagumbi okulala amane kunye neebhafu ezimbini ezinombono omhle weLake Louise kunye nokuhamba ngemizuzu emihlanu ngokukhawuleza ukuya elunxwemeni kunye nebhodi ehambelana nosapho! Yonwabela yonke le nto iPoint Pleasant inokukunika. Idibana nayo yonke iminqweno ebandakanya ukuhamba ukuya elwandle, ibhodi yokuhambahamba, iindawo zokutyela ezigqwesileyo, kunye neendlela ezikufutshane. Indawo yokupaka engenaxinzelelo ukuya kuthi ga kwiimoto ezintathu. Indlu ikwindawo yokufa kwindawo ezolileyo, enobuhlobo.
Ikhitshi evulekileyo kunye noyilo lokutyela olunamagumbi amabini okulala kumgangatho omnye wokuqhekeka kunye nambini phezulu. Umbono ochukumisayo ukusuka kwigumbi lokulala elikhulu. Amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo aneshawari, kuquka nelinye elikumgangatho ophantsi kufutshane nempahla. Umgangatho ongaphambili lulwandiso lwendalo lwendawo yokuhlala kunye neyokutya ngexesha lemozulu emnandi. Igrill enkulu yegesi yenza ukupheka kwangaphandle kube lula. Ngaphambili/kwicala leyadi ilula nje i-xeriscaped kwaye ifanelekile ukuhlanganisana kufutshane nendawo yokutshisa umlilo. Igaraji enemoto enye inezitulo zaselwandle kunye nezinye izinto.
Indawo ezolileyo, enobuhlobo nosapho. Indlu ihleli ekupheleni kwesitrato sokugqibela esijonge echibini. Kukho i-traffic encinci kwi-Harvard Ave. Iindlela zokuhamba zenza kube lula ukuhamba ujikeleze i-Point Pleasant Beach.
Ngexesha lokuhlala kwakho, indlu kunye neyadi yeyakho kuphela
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Point Pleasant Beach